musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Malta yakavhurika vachengeti veAmerica
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Wemuchadenga maonero eVatatu Maguta, Vittoriosa, Senglea uye Cospicua
Michelle Buttigieg, Mumiriri weNorth America weMalta Tourism Authority, achienda kuVirtuoso Travel Vhiki ari munhu, akauya nenhau dzakanaka kuVirtuoso Travel Advisors vaakasangana navo. Malta, nzvimbo yezvitsuwa muMediterranean, munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti yakavhurika vachengeti vekuAmerican vanogona kuongorora ruzivo rwavo rwehutano kuburikidza nedhijitari inonzi Verifly. Mme Buttigieg akataura kuti "Malta, ikozvino, ine zvimwe zvekupa mufambi weumbozha nedzimba dzekugara shanu-nyowani, mamiriro ehunyanzvi hutsva / nzvimbo dzekudyira, nzvimbo dzekudyira dzeMichelin Star uye zviitiko zvakapetwa."
Malta inopa yekupedzisira nzira yeumbozha, iine huwandu hwenzvimbo dzekugara dzakanaka kubva kune shanu-nyeredzi zvivakwa, emahombekombe emahotera emahotera, kune enhoroondo palazos uye dzimba dzekurima.
Vashanyi vanogona zvakare kunakidzwa nezviitiko zvakakosheswa kubva kushoma-kweawa kushanya kwenzvimbo dzezvakaitika kare kucharter yacht.
Malta inowanikwa nyore nyore kuburikidza neEuropean Gateways huru.
Michelle Buttigieg akacherechedzawo kuti paive nekufarira kukuru uye kufara pakati peVirtuoso Advisors kuti vakwanise kupa vatengi vavo ruzivo rwekugara munzvimbo inotaura Chirungu, isina kuzara kupfuura akawanda anozivikanwa eEuropean nhoroondo, uye nekusiyana kwakadai kuti pane chimwe chinhu munhu wese. "Malta inopa nzira yekupedzisira yeumbozha, iine nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugara kubva kune shanu-nyeredzi zvivakwa, emahotera emahotera emahotera, kune epalazos enhoroondo uye dzimba dzekurima," akadaro Ms. Buttigieg. “Vashanyi vanogona zvakare kunakidzwa nezviitiko zvakakosheswa kubva kunzvimbo dzekumashure-awa kwenzvimbo dzine nhoroondo kusvika kucharter yacht. Zviitiko zvese zveumbozha izvi zvinogona kuwanikwa muMalta zvishoma kana zvichienzaniswa nemutengo wedzimba dzakafanana uye kushanya kwakazara muEuropean. ” Malta inowanikwa nyore nyore kuburikidza neEuropean Gateways huru.
Virtuoso Vhiki Yekufamba muLas Vegas ndiyo yekupedzisira yegore rose yekufamba nzanga chiitiko kune ese epasi rose Virtuoso Nhengo, Advisors, uye Vanosarudzwa Partner. Inosarudzika kune network yeVirtuoso, inoratidzira kugadzwa kwewebhusaiti, mikana yakakura yekuvandudza kwehunyanzvi, Nharaunda Globetrotting, uye kupemberera kweVirtuoso, yepasirese yepamusoro yekutenderera netiweki.
The zuva zviwi zveMalta, pakati peGungwa reMediterranean, mune musha unoshamisa kwazvo weyakavakwa nhaka, kusanganisira huwandu hwakanyanya hweUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero. Valletta, yakavakwa neanodada Knights yeSt.John, ndeimwe yezviono zveUNESCO uye European Capital of Culture yegore ra2018.Malta patrimony mumatombo ematombo kubva kune ekare-emahara matombo ekuvakisa pasi rose, kune imwe yeBritish Empire's masisitimu anotyisa kwazvo anotyisa, uye anosanganisira musanganiswa wakapfuma wemapurani epamba, echitendero neemauto kubva munguva dzekare, medieval uye nguva dzekutanga dzazvino. Nemamiriro ekunze ane zuva rinotyisa, mahombekombe anoyevedza, hupenyu husiku hunobudirira uye makore zviuru zvinomwe zvenhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. www.chandiramani.com